बाहिर सुँगुर र रक्सीको भोज, भित्र गाउँको नामै काटकुट - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
बाहिर सुँगुर र रक्सीको भोज, भित्र गाउँको नामै काटकुट
सोलुखुम्बु । गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाएर दूधकौशिका गाउँपालिकाको नाम नै परिवर्तन गरिएको छ । ठगी मुद्दाका अभियुक्तसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले काठमाडौंबाट गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका मान्छे लगेर जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाएर आइतबार राति गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी थुलुङ दूधकौशिका राख्ने निर्णय गराएका हुन् ।
गाउँपालिका प्रमुख राई माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् । ठगी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका उनले अहिले अदालतको फैसलाको तामेली नबुझेको किर्ते जालसाझी गरी मुद्दालाई सुरुवाती अवस्थामा फर्काएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राईबाट २० लाख रूपैयाँ लिएर मुद्दा जिताउने ठेक्का लिएको बताइन्छ । यिनै ठग राईले रातारात गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी जातीय नामबाट नामकरण गराएका छन् । दुधकौशिका गाऊँपालिकाको नामका अगाडी राइहरूको थर थुलुङ झुन्ड्याएको छ । जबकि यो गाउँपालिकामा २२ जातीको बसोबास छ भने राइहरूको जनसंख्या पाँच–छ सयले मात्र बढी छ । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि ३÷४ सय मान्छे मारेर खुलेका जातीय र क्षेत्रीय पार्टीहरूसमेत यसरी पार नलाग्ने भन्दै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने होडमा लागेका बेला भने राईले गाउँपालिकाको नाम नै जातिका आधारमा नामकरण गरेर चरम जातीयताको भद्दा अनुहार प्रदर्शन गरेका छन् ।
डरत्रास देखाएर भने पनि गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन उनले शुक्रबार काठमाडौंबाट तीनवटा टाटासुमो रिजर्भ गरेर मान्छे लगेका थिए । गोरेबहादुर खपांगीको जनमुक्ति पार्टीमा लागेका देम्बु राई, लोचन राई, प्रेमकुमार राईलगायतको समूहलाई उनले काठमाडौंबाट आतेजाते सबै खर्च बेहोरेर झिकाएका थिए । आइतबार गाउँसभाको बैठकमा भित्र जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाएर नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दा बाहिर सँुगुर काटेर मासु र रक्सीको भोज लगाइएको थियो । कतिसम्म भने आइतबार राति यो निर्णय भए पनि मंगलबारसम्म भोज रोकिएको छैन ।
ठगी मुद्दामा फेरि पनि दोषी ठहर भएर जेल जानुप¥यो भने यति त गरे भन्दै गाउँपालिका प्रमुख राई छाती फुलाएर हिँड्ने गरेको बताइन्छ । गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णयमा वडा नं. २ का अध्यक्ष उदय बस्नेत र वडा नं. ६ का अध्यक्ष फुर्तीमान तामाङले भने हस्ताक्ष्र गरेका छैनन् । यद्यपि वडाध्यक्ष बस्नेतलाई पनि हस्ताक्षर नगरे भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिइएको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, ठगी मुद्दाका अभियुक्त राई गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने तयारीमा भनेर ‘बुधबार’ साप्ताहिकले भदौ १४ गतेको अंकमा नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।